AMBOROVY - MAHAJANGA : Telo lahy mpanakan-dalana voasambotry ny Zandary
Efa hatramin’ny ela no nanao vela-pandrika ny Zandary tao Amborovy mikasika ireo mpanendaka eny amin’ny lalana mihazo ny seranam-piaramanidina ao Mahajanga Eo anelanelan’ny Hasyma sy Poteau mainty no toerana fanaovan’ireo mpanendaka ny asa ratsiny. 14 mars 2017
Andrasan’ireo jiolahy tsara izay rehetra mandalo eo indrindra fa ny mitondra môtô ka hametrahan’izy ireo tady eo afovoan-dalana ka mianjera tampoka izay mitondra azy. Miakatra avy ao anatin’ny kirihitr’ala ireo mpanendaka ary midaroka izay sendra azy ireo ary mandrava ny zavatra izay tiany alaina amin’izao olona lasibatra azy ireo.
Nametraka fitarainana ireo mponina ao amin’ny Fokontany Amborovy mikasika ity fandravana eny amin’ny lalana Poteaux mainty ity ka nanao vela-pandrika
ny Zandary. Ny sabotsy teo dia mbola nanohy ny asa ratsiny ireo jiolahy ka telo izy ireo no nanatanteraka izany amin’io lalana io. Olona dimy samy hafa no lasibatra ka teo no naharaikitra ny fandrika ny mpitandro ny filaminana afahana misambotra ireto farany.
Tsy lavitra ny toerana nanendahan’izy ireo ny olona dimy no nisy ny Zandary manao ny fiambena. Nohodidinin’ny Zandary ny toerana nisy ireo mpanendaka ka dia sarona teo am-piandrasana olon-lafa ireo jiolahy telo. Avy hatrany dia nosamborina izy ireo ka nentina teny amin’ny tobin’ny Zandary eny Amborovy.
Raha ny fantatra dia efa ela no nikarohana ireto mpanendaka ireto ka izao vao sarona ihany ny asa ratsiny. Avy amin’ny Fokontany Ambalavola sy Ambondrona no ipetrahan’ireo jiolahy ireo ka eny amin’ny lalana hihazo ny seranam-piaramanidina iny izy ireo no manao ny asa ratsiny. Rehefa manomboka maizina ny andro dia efa miafina ao anatin’ny kiritr’ala izy ireo miandry ny olona mandalo amin’ny toerana iny. Nandray fepetra hatrany ny Zandary fa hanamafy ny fiambenana iny toerana iny indrindra amin’ny andro alina.
Hatolotra ny Fitsarana tsy ho ela izy telo lahy mpanendaka ireto miandry ny sazy izay mifanandrifiny aminy.